FactGem: ampidiro ao anatin'ny minitra ny loharanom-pahalalana… Tsy mila kaody! | Martech Zone
Alahady Oktobra 8, 2017 Douglas Karr
Ao anaty silio ny data. Ny orinasa sy ny IT dia samy mitaky fomba fijery mirindra momba ny angon-drakitra mba hanomezana vahaolana amin'ny olan'ny orinasa ankehitriny. Ilaina ny tatitra manome ny fomba fijery mitambatra momba ny angon-drakitra mba hahafahan'ny olona mijery vaovao izay zava-dehibe amin'ny fikambanan'izy ireo ary mametraka fahatokisana amin'ny fahafahany manatanteraka sy manome vaovao marina izay manakiana ny fahombiazan'ny orinasa.
Na izany aza, ny angon-drakitra dia miparitaka amin'ny rafitra fifandraisana maro, ny mainframe, ny filesystems, ny antontan-taratasim-birao, ny mailaka mifandraika ary maro hafa. Satria tsy mitambatra ny angona ary mbola mitaky fampahalalana mitambatra ny orinasa, ny orinasa dia manao fampidirana “sezivezivezy” ary mamorona tatitra “mitrandraka sy mampitaha”. Manontany silo iray izy ireo ary mandika ny valiny mba hivoatra, hangataka silo hafa ary hametaka ireo data matetika. Averin'izy ireo ity fomba ity mandra-pahazoan'izy ireo zavatra izay maneho ny tatitra tena tadiavin-dry zareo noforonina. Ity karazan-tatitra ity dia miadana, mora ampiasaina, tsy azo atokisana ary hadisoana!
Ny ankamaroan'ny fikambanana dia miaiky fa ny fitaovana sy ny teknolojia namorona ny olan'ny data silo dia tsy azo ampiasaina amin'ny vahaolana. Vokatr'izany, nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay, dia hitantsika ny fiparitahan'ny tahiry sy teknolojia NoSQL naparitaka hanampy amin'ny fampidirana haingana ny angona sy ny hakingana kokoa. Na dia afaka mampihena ny fotoana fampidirana data raha ampitahaina amin'ny fomba nentim-paharazana ireo tahiry vaovao sy matanjaka vaovao ireo, izy rehetra dia mifototra amin'ny developer ary mitondra fanamby hafa mila resena rehefa mahazo ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fampandrosoana sy miasa miaraka amin'ireo teknolojia ireo. Betsaka ny sakana misy ao anatin'ity dingana ity, ao anatin'izany ny fanavaozana ny fitantanana ny fanovana sy ny fizotry ny asa hahombiazana amin'ny fanomezana valiny.
FactGem manome fomba fampidirana data nefa tsy manoratra kaody. Mino izy ireo fa tokony hisy fomba mora kokoa hampidirana data, ary misy izany. Izy ireo no namorona azy!
Ny ekipa injeniera ao amin'ny FactGem dia nandray ny enta-mavesatra amin'ny fikirakirana ny fahasarotan'ny fampidirana ka tsy mila manao izany ireo mpampiasa orinasa. Ankehitriny, ny dinika fampidirana data dia tsy voatery hatomboka amin'ny IT. Vokatr'izany dia azo ampiasaina ny rindranasa fampidirina data DataGem hampiditra haingana ireo data tsy mitovy mba hanomezana tatitra mirindra momba ny angona tapaka taloha.
Ny tonga ao dia ny namahanay an'io olana tsy azo atao io amin'ny fomba fijery teknolojia, fa ny tena omenay dia vahaolana amin'ny orinasa. CEO Megan Kvamme
Rehefa mampifandray angona dia manomboka amin'ny fiheverana fa efa namboarina ny angon-drakitrao. Ny olona tena marani-tsaina ao amin'ny fikambanana misy anao, ary azo inoana fa ireo mpivarotra izay nividiananao ny rindranasa sy ny vahaolana dia namorona ireo maodely ireo. Ireo fikambanana sy fifandraisana izay karakarainao ary tianao hampitambatra mivantana ao amin'ny data data-nao. Toa ny mpanjifa, baiko, fifanakalozana, vokatra, tsipika vokatra, mpamatsy, fampitaovana ary maro hafa izy ireo. Tian'izy ireo ny manokatra ny angona ao amin'ireto fikambanana ireto ary mampivondrona azy ireo ao anaty tatitra iray izay manome hevi-baovao mahomby. Miaraka amin'ny FactGem, asa tsotra ity.
Raha azonao atao ny manintona ny entity sy ny fifandraisana amin'ny fikambananao amin'ny takelaka fotsy, dia azonao atao ny mampiasa FactGem hampifangaro ny data-nao. Tsotra be izany.
Mba hampifangaroana angona amin'ny FactGem, atombohy amin'ny WhiteboardR. Amin'ity rindranasa ity dia sintomy sy alatsaho ireo entity sy ny fifandraisana mba hamoronana ny maodely lozika ho an'ny angon-drakitra mifamatotra amin'ny alàlan'ny "whiteboarding" azy ao anaty browser. Ao amin'ny WhiteboardR, farito izay toetra tianao hampifandraisina amin'ny antokon'olona tsirairay, ary mila modely izay ilainao fotsiny ianao rehefa mila izany. Tsy mila mahafantatra ny toetra rehetra mifandraika amin'ny orinasa rehetra ianao alohan'ny hanombohanao. Tsy mila mahafantatra ireo silo sy loharano tianao hampidirina ianao amin'ny farany. Ny fomba fanao tsara indrindra dia ny manomboka amin'ny famoronana modely ho an'ny silo vitsivitsy fantatrao fa afaka manome tatitra mitambatra - ary lanja eo noho eo amin'ny orinasanao. Alefaso tsirairay ny entanao, ny toetrany, ary ny fifandraisany. Azonao atao mihitsy aza ny mamorona fitsipiky ny orinasa hamaritana izay mampiavaka ny orinasa sy ny tokony ho kardinaly misy ny fifandraisany amin'ny orinasa hafa mifandraika amin'izany. Vantany vao noforonina ity maodely ity dia apetrakao ilay maodely mba hahafahany ampiasaina amin'ny MappR.
Raha mamela anao hampiasa rindranasa iray i WhiteboardR hamaritana modely fandraharahana mitambatra, miray sy manerantany, MappR dia mamela anao hanao sarintany data tsy manam-paharoa amin'ny maodely WhiteboardR mitambatra. Ao amin'ny MappR, azonao atao ny manandrana loharanom-baovao ary manomboka mamorona sarintany. Andao lazaina fa amin'ny loharano iray avy amin'ny silo iray dia manana toetra ianao cust_id ary amin'ny silo hafa dia manana toetra ianao mpikambana_id, ary fantatrao fa samy manondro mpanjifa ireo. Miaraka amin'ny MappR, azonao atao ny mitanila ireo toetra roa ireo amin'ny toetra mampiray mpanjifa_id efa nofaritanao tao amin'ny maodely WhiteboardR natambatra. Raha vantany vao asianao sarintany ireo toetranao izay tadiavinao ho loharano iray, ny MappR dia afaka manafatra rakitra avy amin'io silo io ary hampidirina ho azy ao amin'ny maodelin'ny WhiteboardR ary hanontaniana avy hatrany amin'ny fomba fijery mirindra. Azonao atao ny manohy manisy sarintany ny loharanom-pahalalana sy mampiditra angon-drakitra toy izao mandra-panafaranao ny angona tadiavinao ho an'ny fijerinao mitambatra.
Miaraka amin'ny WhiteboardR sy MappR, azonao atao aza ny manangona, manaova sy mandefa ireo maodely noforoninao. Ireo maodely ireo dia manana lanja satria izy ireo dia lasa peratra decoder amin'ny fanampiana ny orinasa sy ny IT hampahafantatra ny fahalalany ny angon-drakitra ataon'ny fikambanana, ny fomba tokony hampiasana azy, ary ny fomba ampiasana azy manerana ny silo. Ireo maodely ireo dia azo ampiasaina hanampiana amin'ny fampahafantarana ireo fanapariahana angon-drakitra vaovao sy fandraisana andraikitra miorina amin'ny sehatra vaovao mba hiantohana ny fahombiazan'izy ireo.
Raha vantany vao fenoina ny angon-drakitra dia mamela anao hamorona dashboard tsotra sy azo angatahina manerana ny angona natambatrao ao anaty tranokala ny BuildR. ConnectR dia mamela anao hametaka mpampitohy data data ho an'i Tableau sy fitaovana BI hafa hahafahanao mampiasa ireo fitaovana ireo amin'ny fanaovana tatitra amin'ny angon-drakitra natambatrao ankehitriny.
Satria i FactGem dia manao ny fampiakarana mavesatra ny fampidirana angon-drakitra, ary satria tsy mila mamolavola sy manaingo ny zavatra ilainao fotsiny ianao, araka ny ilainao azy, haingana be ny fampidirana data sy ny fandefasana hevi-baovao. Ahoana izany eo amin'ny tena fiainana?
Ity misy toa ny fampiraisana data data normal:
Tamin'ny fahavaratra lasa teo dia nisy mpivarotra antsinjarany iray Fortune 500 nanantona an'i Factgem, nangataka fanampiana satria mampiasa CRM goavambe izy ireo ary misintona angona avy amin'ny toeran-kafa mba hanandramana mahazo fahitana. Ny lehiben'ny siantifika data dia nila nanambatra mora ny fivarotana, ny e-varotra ary ny fampahalalana momba ny trano fitehirizana ny mpanjifa hahafantarana hoe "Iza no mpanjifa?"
FactGem dia nampanantena ny fandefasana ao anatin'ny 24 ora. Nanangana maodely mifandraika amin'ny fivarotana sy ny mpanjifa rehetra izy ireo, nanala hevi-baovao ary nanao izany tao anatin'ny 6 ora fa tsy 24! Ary noho izany . . . Teraka ny mpanjifa # 1 amin'ny antsinjarany. Nifindra avy nijery tanàna iray tao anatin'ny 6 ora izy ireo ary nizotra nanerana ny firenena, fivarotana an'arivony maro, mpanjifa am-polony tapitrisa sy terabytes data - ary manao izany rehetra izany amin'ny asa iray andro. Ny sasany amin'ny varotra, serivisy ara-bola ary ny famokarana koa izao dia manomboka mahita sy mahatsapa ny tombontsoa azo avy amin'ny FactGem ao amin'ny fikambanan'izy ireo.
Ny teknolojia dia nandroso tamin'ny teboka izay tsy tokony ho izy irery intsony no mason'ny injeniera. Ny fampidirana angon-drakitra maoderina dia tsy sarotra noho ny sampan-draharahan'ny IT tianao hinoanao. CTO Clark Richey
Ny Module WhiteboardR an'ny FactGem dia mampifandray loharanom-pahalalana tsy mitovy amin'ny tsy fampiasana kaody.
Tsidiho ny FactGem raha te hahalala bebe kokoa
Tags: Clark Richeyfananganana datafactgemfampidiranamapprMegan Kvammewhiteboardr